नेपाल बैंकका कर्मचारीको मिलेमतोमा पित्तललाई सुन भनेर 'सुनकर्जा' दिने गरेको खुलासा !
ARCHIVE, BANKING, INVESTIGATION » नेपाल बैंकका कर्मचारीको मिलेमतोमा पित्तललाई सुन भनेर 'सुनकर्जा' दिने गरेको खुलासा !
काठमाडौँ - पित्तललाई सुन भन्दै धीतो राखेर 'सुनकर्जा' दिने नेपाल बैंकका ११ जना कर्मचारी पक्राउ परेका छन् । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो यस्तो गैरकानुनी काम गर्ने कर्मचारीहरुलाई पक्राउ गरेको हो । शुक्रबार दिउँसो ब्यूरोको टोली धरान पुुगेको थियो । पक्राउ पर्नेमा नेपाल बैंक लिमीटेड धरान शाखाका गोल्ड लोन म्यानेजर होम भट्टराईसहित ११ जना छन् ।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक शेरबहादुर बस्नेतका अनुसार बैंकको केन्द्रीय कार्यालयको उजुरीपछी उनीहरुलाई पक्राउ गरिएको हो । कमसल धीतो राखेर सुन कर्जा दिएको भन्दै उनीहरुमाथि प्रचलित कानुन बमोजिम कारवाही प्रक्रिया अगाडी बढाइने बताइएको छ ।